Caqiidada kale ee Afrikaanka ah | KONGOLISOLO
Dooddu way furan tahay! Halyeeyga Diinta Druid: Diintii Druid, waxaa la yiri, sida ay qabaan caalimkooda, in Hu uu abuuray hay'ad samafal, waxaana la keenay adduunka ...	Akhri wax dheeraad ah
Xilka xusuusta: guur aan caadi ahayn; mar labaad ayaan ku kulannaa Maarso 2013 dalka Zimbabwe; aan la rumaysan karin, laakiin run, waxaa jiray guur u dhexeeya naag 61 jir ah iyo wiil 8 jir ah ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: July 13, 2020 02: 45 No Comments
Wiil 8 jir ah ayaa guursaday haweeney 61 jir ah. Qiyaastii 100 qof ayaa runtii goobjoog ka ahaa dhacdada, inta badan…	Akhri wax dheeraad ah